डाक्टर हुँ भन्दै यी तीनजनाले गरे यस्तो सोच्नै नसक्ने काम, प’क्राउ गर्ने प्रहरी पनि परे छक्क ! – List Khabar
Home / समाचार / डाक्टर हुँ भन्दै यी तीनजनाले गरे यस्तो सोच्नै नसक्ने काम, प’क्राउ गर्ने प्रहरी पनि परे छक्क !
डाक्टर हुँ भन्दै यी तीनजनाले गरे यस्तो सोच्नै नसक्ने काम, प’क्राउ गर्ने प्रहरी पनि परे छक्क !
admin December 5, 2021 समाचार Leaveacomment 193 Views
काठमाडौं– डाक्टरको परिचय दिएर १ करोड २२ लाख ठ’गी प्र’क’रणमा पोखराबाट थप एक युवती पक्राउ परेकी छिन्। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले पोखराबाट दानुमाया गुरुङलाई शुक्रबार पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको छ। प्रहरीले बुधबार र बिहीबार मात्रै अनलाइनमार्फत् १ करोड २२ लाख ठ’गी गरेको आरो’पमा २ जनालाई प’क्राउ गरेको थियो। महाशाखाको टोलीले पोखरा उपमहानगरपालिका–१० का ४४ वर्षीय राजेन्द्र भण्डारी र काठमाडौं–१३ ताहचलका २८ वर्षीय रोजन भुजेललाई प’क्राउ गरेको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगमा काम गर्ने एक महिलालाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर चार महिनाको अवधिमा १ करोड २२ लाख रुपैयाँ ठ’गि’एको थियो। आफूलाई डाक्टर बेन्जामिन फ्रां’कलिन भनेर चिनाउने ती व्यक्तिले राष्ट्रसंघीय नियोगमा काम गर्ने एक महिलालाई फेसबूकमा ‘साथी’ बनाएका थिए। बेलायती नागरिक बताउने ती व्यक्तिले आफू प्लाष्टिक सर्जन भएको र एक हप्ताको कोर्सका लागि मलेसिया आउँदा रकम लु टि ‘एको भन्दै नियोगकी महिलासँग अनलाइनमार्फत् सहयोग मागेका थिए।
रकम निकाल्न एटीएम बुथमा जाँदा आफू लु’टि’एको र अहिले रकम सहयोग गरेर बेलायत पुगेपछि दोब्बर फिर्ता गर्ने आश्वासन डाक्टर बताउने व्यक्तिले दिएका थिए। सोही लोभमा पटक–पटक गर्दै ती महिलाले १ करोड २२ लाख रुपैयाँ पठाएकी थिइन्।
रकम पठाउन तयार भएपछि नेपालमै रहेका केही व्यक्तिको बैंक खाता नम्बर समेत दिइएको थियो। त्यसपछि ती महिलाले भण्डारी, भुजेल लगायतको बैंक खाता नम्बरमा पैसा पठाएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। उक्त रकम नेपालबाट संकलन गरेर भारत पठाउने सम्मको काम हाल पोखराबाट पक्राउ परेकी महिलाले गरेको पाइएको महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा बसेर ठ’गीको मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको महाशाखा स्रोतले स्वा’स्थ्यखबरलाई जानकारी दियो।
हाल पक्राउ परेकी महिलाले मात्रै ७८ लाख रुपैयाँ सं’क’लन गरेको र संकलित रकममध्ये भारतको एसबीआई बैंकमा भारु २३ लाख रुपैयाँ पठाएको अनु.सन्धानबाट खुलेको छ। हाल पक्राउ परेकाहरुलाई प्रयोग गरेर ठ’गी भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनु. सन्धानमा खुलेको छ। त्यसमध्ये हाल पक्राउ परेकाहरुले केही प्रतिशत कमिसन पाउने लोभमा ठगीका योजनाकारले भनेअनुसार काम गर्ने गरेको प्र’हरीले जनाएको छ। आफूलाई डाक्टर बेन्जामिन भएको बताउने व्यक्ति मेलेसिया नभएर भारतमा भएको हुनसक्ने प्रह’रीको अनु.सन्धानबाट खुलेको छ।
प्र’हरीका अनुसार दोब्बर रकम पाउने आशमा १ करोड २२ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ फसेपछि पी’डित महिला प्रहरीमा पुगेकी थिइन्। ती महिलाको उजुरीपछि ठगीको रहस्य बाहिरिएको हो। स्वास्थ्य खबर
Previous छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस्
Next ओमिक्रोन भेरियन्टबाट जोगिन बुस्टर डोज दिने निर्णय